Tirada Argagixisadda ee La Adeegsaday Tan iyo 1dii Janaayo, Waxay Noqotay 1359 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTirada argagixisada la go'doomiyey laga soo bilaabo 1dii Janaayo waxay ahayd 1359
09 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, coronavirus, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Tirada argaggixisada oo laga takhalusay tan iyo bishii Jannaayo
Taliyaha guud, Janaraal Yaşar G ,ler, Taliyaha ciidamada milatariga Gen. Ümit Dündar, Taliyaha ciidamada badda Admiral Adnan Özbal, Taliyaha ciidamada cirka Hasan Küçükakyüz iyo wasiir kuxigeenka gaashaandhiga Yunus Emre Karaosmanoğlu, iyo Alpaylan Kavaklıoğlu iyo Şuay Alpay Hawlaha Wasaaradda waa laga wada hadlay.
Qiimeyntiisii ​​kulanka, Wasiir Akar wuxuu ku sheegay in inta dagaalka dagaalka ka dhanka ah cudurka faafa ee coronavirus uu sii socdo, dhanka kale howlgalada ciidamada qalabka sida ee Turkiga ay ku dheehantahay la dagaalanka argagixisada.
Wasiir Akar wuxuu cadeeyay in howlaha TSK ay ka wadaan 5-ta gobol ee howlgalada ay ku socdaan si isku mid ah, “Aad ayey muhiim noogu tahay inaan sii wadno howlgaladaas. Isla mar ahaantaana, aagaggaan, Mehmetçi, halkan ma aha inuu ku taabto fayraskan sinaba. Waxaa jira dadaal dheeri ah oo tan loogu talagalay. Codsiyada gudaha iyo qorshaynta labadaba waxaa looga shaqeeyaa Wasaaradda, Shaqaalaha Guud iyo xarunta Xoogga waa kuwo aad u culus. Natiijo ahaan, nasiib wanaag, qodob muhiim ah ayaa ilaa hadda la gaadhay, hawlaheenna ayaa sii socda iyada oo aan wax shil ah dhicin ”.
Wasiir Akar, ayaa ku nuux nuuxsaday in dagaalka ka dhanka ah argagaxisadu uu si is daba joog ah u socdo, “17 argagixiso oo ku kala sugan gobolada kala duwan ayaa la go’ay intii howlgalladu socday shalay. Ilaa iyo Janaayo 1, tirada argagaxisada ee lagu go'doomiyey aagagga hawlgalka ayaa ahaa 1359. Mehmetçi wuxuu shaqadiisa ku qabtaa geesi geesinimo weyn leh oo naftiisa u huray viruska iyo argagixisada. ”
Wasiir Akar, oo u rajeeya wanaag iyo hawlkarnimo geesiyaal Mehmetçi, oo gudanaya waajibaadkiisa isagoo guul weyn ka soo hooyay duruufaha adag ee cimilada ee ka jirta guriga iyo guud ahaan soohdinta, ayaa muujiyay rabitaankiisa naxariis ee shuhadayaasha isla markaana si deg deg ah loogu bogsiiyo kuwa dhaawacmay.
Isagoo xusuusinaya in TSK ay billowday hirgelinta ka hortag iyo ka hortag laga bilaabo maalinta koowaad ee dagaalka ka dhanka ah cudurka faafa ee coronavirus, Wasiirka Akar ayaa yiri:
“Gaar ahaan markii la aasaasay Xarunta La-dagaallanka Coronavirus (KOMMER) ee Wasaaradda dhexdeeda, Wasaaradda Caafimaadka iyo wasaaradda laxiriirta ayaa halganka u keenay heerarkan kadib wada shaqeyn xoog leh oo lala yeesho hay'adaha. Qorshayaashayagii halganka wuu sii soconayaa, waxaanan sii wadaynaa inaan qaadno tallaabooyinka looga soo horjeedo dhammaan suurtagalnimada. KOMMER wuxuu ahaa guul weyn oo raadinta kiisaska shaqsiyadeed. Wuxuu si joogto ah u kormeerayaa goobta wax walbana si firfircoon ayuu u qaadaa. ”
WAA INAAN LAHAYN LUXUR, WAA IN LILLAAHI RAAJICUUN
Isaga oo taabanay muhiimadda ay leedahay in la dhaqan galiyo mabda'a joogitaanka ee dagaalka lagula jiro coronavirus, Wasiirka Akar ayaa yidhi, "Waxaan siineynaa faa iidooyin culus oo ku saabsan la dagaalanka fayraska anagoo ku qabanay dhamaan shaqada ugu yar shaqaalaha".
Isagoo ku nuuxnuuxsadey in hirgelinta talaabooyinka la qaaday lagu qaaday si qotodheer iyo edbin illaa iyo imminka, Wasiir Akar wuxuu xasuusiyay in sarkaal rayid ah uu u dhintay cudurkaan. Isaga oo u rajeynaya shaqaale dowladeed oo naftiisa ku waayey, Wasiir Akar wuxuu sidoo kale u rajeeyay shaqaale ka sii shaqeeya daaweynta lagu daweeyo qeybta daryeelka degdegga ah inuu si dhakhso leh u soo kaban doono. Wasiir Akar wuxuu yidhi;
“Hadafka aan gaarnay, ma lihin raaxeysashada raaxeysiga ama raaxeysashada. Tani waa mid ka mid ah khataraha ugu weyn. Si aynaan u soo gaadhin heerkan, waa inaan ilaalinaa caqligeenna. Intaa waxaa dheer, waxaan sameynay qaybteena qorshaha caadiga ah iyo khariiddada wadada uu ku dhawaaqay Madaxweynahayaga, waana sii wadi doonnaa sidaas. Arrinta ugu muhiimsan halkan waa waajibaadka ciidamadeenna hubaysan, amniga xuduudahayaga, madax bannaanidayada, madax-bannaanideena, amniga waddankeenna, qarankeenna, badda, badda iyo hawada. Waxaan gacan ka geysaneynaa sidii caadada loo ahaan lahaa anagoo fulinayna howlaheena sida ugu wanaagsan anigoon ku xadgudbeynin sinaba. Iyadoo la waafajinayo tilmaamaha Madaxweynaheenna, dhammaan wasaaradaha, hay'adaha iyo ururraduba waxay ku dadaalayaan sidii caadiga ahayd. Waxaan kaalinteenna ka galnay jadwalkaan, waxaanan sii wadaynaa wixii aan u baahanahay inaan ku qabanno si habboon.
WAA IN AAN SI AAD UGU XANUUNSATO
Coronavirus la anti tusay haddii ay tahay meel dheeraad ah oo ku caan ah marka la barbar dhigo Turkey iyo waddamada kale, Wasiirka adkeeyay Akar, "qaab caadi ah oo dhan wax ku ool ah sida lagu soo sharxay in our Madaxweyne 31 ka dhigista waxaa laga May 5 hawlgallada xereynta ka June, 14 June Waxaan qorsheynay gelitaanka imtixaanka Jaamacadda Difaaca Qaranka iyo gelitaanka dhalinyaradayada, oo loo xushay inay ka shaqeeyaan militariga laga bilaabo Juun 20, ciidamada qalabka sida. Waxaan kula soconnaa si taxadar leh oo sax ah. Waxaan ku dadaali doonnaa in hawshan aan ka dhigno mid caafimaad qab, mid guuleysata oo wax ku ool ah iyadoo aan wax dhibaato ah la kulmin. ” Isagoo farta ku fiiqaya muhiimada abaabulka iyo u yeerista, ayuu Wasiir Akar yiri:
Gaar ahaan, yeedhitaanku waa mid aad muhiim u ah. Mehmetçi, oo shaqada laga saari doono, ayaa durba gacanta ku haya caafimaadka, waxaa la qaaday talaabooyin ilaalin ah, welina waa la qaadayaa. Waxaa lagu hayn doonaa ilaalo 14 maalmood ka hor inta aan shaqada laga eryin. Si kastaba ha noqotee, ahaan ahaan u yeeritaan ahaan, waxaan u baahan nahay inaan aad uga taxaddarno gelinta da'yarteenna dhammaan waddankeenna ciidammada Qalabka Sida. Halkan, sidoo kale shaqaalaheena guud, Taliska Ciidamada, Askeralma General Directorate (ASAL), shaqada ciidamadeena aad bey muhiim u yihiin. Sikastaba, waxaan muujin doonnaa dareenkeena waxaanna aqbalnaa wicitaanada qaabkan si aan qatar ugu gaarin caafimaadka dhalinyarada, xubnaha ciidamada qalabka sida hada xafiiska.
Wasiir Akar wuxuu yidhi, “Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga, oo ay la socdaan qiyamkooda qaran, ruuxiyannimo iyo xirfadeed ee ka soo qulqulayay kumanaanka sano ee taariikhdeena sharafta, iyadoo la eegayo caqliga iyo sayniska, iyadoo la raacayo dastuurka, iyadoo la raacayo qawaaniinta iyo tilmaamaha Madaxweynahayaga; Isagu wuxuu ku jiraa amarkiisa umadiisa iyo bilowga waajibaadkiisa.
Waxtarna u lahayn Sarkaalka Amniga Tukaannada Tuugta TCD
Agaasimaha guud ee Askeralma
Xakameynta caafimaadka ee Mehmetçi
Mehmetçik waa la siidaayaa
Laga soo bilaabo Madaxwaynaha Topbas ilaa Kılıçdaroğlu'na jawaabaha metro
Weerarka argagixisada ee Mujaahidiinta
Waxyeellada argagixiso ee Sarikamış Ski Center 1 million euros
Xeerarka shahiidooyinka shaqaalaha ee shaqaalaha TCDD ee dhibanayaasha argagixisada ah